China Nyowani Window Yemhepo Inodzora 12V 24V Ultrathin Model Rori Kupaka Mhepo ma Conditioners vagadziri uye vanotengesa | Hollysen
Kupaka mhepo kutonhodza, kutsigira matraki, marori, michina yekuvaka. Inogona kugadzirisa dambudziko remarori uye michina yekuvaka kana rori uye gakanje kupaka panzvimbo. Kuti ushandise DC12V / 24V / 36V pa-bhodhi bhatiri simba is supplyfor mota air conditioning. Pasina kugadzirira nemidziyo yejenareta; Iyo firiji sisitimu inoshandisa yakachengeteka uye nharaunda-inoshamwaridzika firiji iri R134A, kuitira kuti iyo yekupaka mweya yekugadzirisa inowedzera simba-yekuchengetedza uye nharaunda-inoshamwaridzika magetsi dhiraidhi mhepo yekuisa. Zvichienzaniswa neyechinyakare pane-bhodhi yemhepo maekisesaizi, kupaka mamhepo mahara haafanire kuvimba nesimba remotokari yemota, iyo inogona kuchengetedza mafuta uye kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
Sekureva kwekutsvaga uye mhinduro yemusika, kuiswa kwekupaka mweya wekugadzirisa kwave kuita, kwete chete kuchengetedza mafuta nemari, asiwo zero kusvibiswa uye zero zero. Iko zvakare kudzikisira kwesimba kushandiswa. Yokupaka mweya yekumisikidza yuniti yakaiswa padenga remotokari, iyo compressor, kupisa chinja uye musuwo wokubuda wakabatanidzwa pamwechete, kunyanya kubatanidzwa kwepamusoro, yakazara yakanaka, chengetedza nzvimbo yekumisikidza, ndiyo dhizaini yakakura kwazvo.
WDC-ZCKT16A / WDC-ZCKT16B
Evaporative mweya vhoriyamu
Kutonhora mweya vhoriyamu
Kukosha kwekupaka mhepo yekuisa mhepo:
1. Inogona kusangana nezvinodiwa zvekutonhora zvekutyaira roombasically;
2. Ruzha rudiki, rinenge risingazokanganisa vakasara vemarori;
3. Zvichienderana, mutengo wekushandisa injini wakadzikira pane kuvhura mhepo yekugadzirisa.
Wepamusoro-akaisirwa ese-mu-one muchina maficha:
1. Haufanire kubaya, pasina kukuvara kwemuviri wemotokari;
2. Mhepo inopisa inokwira uye inotonhorera mweya inodonha, yakasununguka uye yakasununguka;
3. Pasina kubatanidza pombi, firiji nekukasira.
Pashure: 12V Auto A / C Compressor Gadzira Fekitori Ye Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
Zvadaro: Yepasi rose Rori Kurara Kugadzirisa 12v 24v Magetsi Mota Yekupaka Inotonhorera Mhepo Ekugadzirisa
Universal Rori Kurara Conditioning 12v 24v El ...